Madaxweyne Trump oo ugu hanjabay Sacuudi Carabiya inay laba mid kala doortaan – Xogmaal.com
Madaxweyne Trump oo ugu hanjabay Sacuudi Carabiya inay laba mid kala doortaan
Ayada oo Mareykanka uu ku cadaadinayey Sacuudi Carabiya inay soo afjarto dagaalka qiimaha saliidda ee ay kula jirtay Ruushka, ayaa madaxweyne Trump waxa uu hogaamiyayaasha dalkaas siiyey diginin kama dambeys ah.
Dagaalkaas ayaa hoggaamiyey in suuqyada caalamka lagu soo fasaxo saliid aan loo baahneyn, taasi oo hoos u dhigtay qiimahii saliidda, islamarkaana si gaar ah u dhowaacday shirkadaha shidaalka Mareykanka.
Wada-sheekeysi taleefon oo dhacay 12-kii April, ayaa Trump wuxuu dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ugu sheegay in haddii ururka saliidda ee OPEC aysan si deg deg ah u dhimin wax soo saarkooda saliidda, ay ku adkaan doonto inuu joojiyo qaraar ay sharci-dejiyayaasha Mareykanka ansixin lahaayeen, oo ciidamada Mareykanka looga soo saarayo Sacuudiga.
“Laba kala doorta, inaad dhintaan wax soo saarka saliidda, ama in ciidamada Mareykanka ee idin difaaca laga saaro dalkiina,” ayuu Trump ku yiri Bin Salman, sida ay dad xog-ogaal ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters.
Hanjabaaddaas ayaa xudun u ahayd cadaadis Mareykanka uu saaray Sacuudiga, kaasi oo hoggaamiyey heshiis lagu dhimay wax soo saarka saaliidda, islamarkaana guul diblomaasiyadeed siisay Aqalka Cad.
Trump ayaa digniintan siiyey Bin Salman, 10 maalmood ka hor inta aan lagu dhowaaqin heshiiska dhimista soo saarka saliidda.
Sida ay sheegeen dad xog-ogaal ah, Maxamed Bin Salmaan ayaa waxaa aad uga yaabiyey hanjabaadda Trump, heer uu gaaray inuu amro dadkii qolka kula jiray inay ka baxaan, si uu si gaar ah ula hadlo Trump.
Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa Reuters u sheegay in maamulka Trump uu Sacuudiga u sheegay in haddii aysan dhimin wax soo saarka saliidda “aysan jiri doonin hab xubnaha congress-ka looga joojiyo inay soo rogaan xanibaado, kana soo saaraan ciidamada Mareykanka dalka Sacuudiga.”
Sarkaalkan ayaa macnaha guud ee fariinta Mareykanka kusoo koobay inay ahayd “inaan idin difaacno, adinkana aad burburisaan shirkadaheena isma qabato.”
Saraakiil sare oo ka tirsna dowladda Sacuudiga oo arrintan wax laga weydiiyey waa ay diideen inay jawaab bixiyaan.